Ulungiso - Foton Motor Group Co., Ltd.
Inkqubo ye-R & D yamanqanaba amabini kunye neBeijing njengekomkhulu, iJamani njengeziko le-elektroniki kunye nezixhobo zombane kunye neetekhnoloji zexesha elizayo kunye neJapan njengelinge le-R & D yenqwelomoya yezithuthi zabakhweli ukwakha ubuchwephesha bobuchwephesha kumgangatho wehlabathi.
ubuchwepheshe kunye nobuntu
Amandla amatsha ayaphuma kutshintshiselwano phakathi kwetekhnoloji kunye noluntu. Amaziko e-R & D eFOTON e-China, eJamani nase-Japan aqokelele iinjineli ezingama-6,500 ezivela kumazwe angaphezu kwama-40 kwaye zabona amalungelo abenzi e-R & D angama-5,000.
IINKCUKACHA ZER & D001
Uvavanyo kunye nokuqinisekisa
uvavanyo lokulinganisa olufanelekileyo
Ukuqhutywa kovavanyo lokulinganisa ulwazelelelo kwimveliso kubandakanya ukukhuseleka kwengozi, iAerodynamics kunye neNVH yokulinganisa kunye nokusebenza okuphucula ngokufanelekileyo amava okuqhuba kwezithuthi, ukhuseleko kunye nokuthembeka.
UVAVANYO LOKHUSELEKO KWITYHALAZA
Uvavanyo lwamandla e-Cab lukhokelela kwishishini.
Eyokuqala eqhuba uhlalutyo lomoya lweCFD kunye netonela yomoya eTshayina, ukunciphisa ukuxhathisa komoya ngama-20% kunye nokonga i-4% yamafutha.
UVAVANYO LOKUQHELEKA KUNYE NOKWENZA IXESHA
Umzi-mveliso okhokelela kwitekhnoloji yokulinganisa ye-NVH, ukuphucula amava okuqhuba kwesithuthi ngokunciphisa ukungcangcazela nengxolo yezinto eziphambili ezinje nge-injini, umzimba kunye ne-chassis.
Ukusebenza okuzinzileyo kunye nokugudileyo
Umzi-mveliso okhokelela kukuthembeka kunye nokuqina
lomntu, ilori kunye nendlela
I-FOTON iphehlelele ilori yokuqala ezimeleyo yase China ngo-2016. Ulwazi kwabelwana ngalo phakathi kwabantu, iilori kunye nendlela ekhuselekileyo, ekhuselekileyo, yokonga umbane kunye nokuqhuba ngokukuko nge-IOV, idatha enkulu kunye nokusetyenziswa kwe-L3 yokuqhuba ngokuzimela. Ukuveliswa kwemveliso enkulu yelori ezizimeleyo kuya kuqalwa kwi-2025.
IFOTON, umboneleli ophambili weenkonzo ze-IOV, qhagamshela abantu, isithuthi kunye nesiphelo sendlela esekwe kwi-IOV, idatha enkulu kunye neqonga lelifu lokwabelana ngolwazi lwexesha langempela, ngokukhawuleza ukunxibelelana nehlabathi kunye nokwenza ngcono iR & D yezithuthi, ukuvelisa, ukuthengisa kunye nenkonzo ukwenza ukuba abasebenzisi ukufumana ukusebenza okrelekrele kunye nolawulo kunye namava odibaniso olungaphaya kokuqhuba kwesithuthi. I-IFOTON ibonelela ngezisombululo ezifanelekileyo ze-IOV kwizithuthi ze-FOTON, abathengi abavela kolu shishino, iiarhente kunye nabanikezeli ngeenkonzo, amaqabane kunye norhulumente.
I-inshurensi ye-UBI Ukuzinikezela okuzinikeleyo Ukuthwala iimpahla kunikezela ngeRefueling kufutshane nophenyo olungekho mthethweni Itrafikhi yexesha lokwenyani kufutshane nokutya kufutshane nendawo yokupaka
uxilongo olukude Uhlangulo lokungafikeleli kwincwadana yemigaqo yamava Amava ezithuthi Ukulwa umkhondo wokungabiwa kwemoto isikhumbuzi sokuhlangula ngexesha likaxakeka
Ukuphuculwa kwemveliso Ukuphuculwa komgangatho kuLawulo loLawulo lweNtengiso